Masuuliyiin ka tirsan DFS iyo Axmed Madoobe oo kulan ku yeeshay Magaalada Garoowe | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Masuuliyiin ka tirsan DFS iyo Axmed Madoobe oo kulan ku yeeshay Magaalada Garoowe
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ku sugan magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa xalay kulamo kala duwan kula qaatay Wasiiro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo waxgar kala duwan.
Kulanka ayaa ka dhacay hoolka martida ee la dejiyay madaxweynaha maamulka Jubbaland,iyada oo xildhibaanada Wasiirada iyo Isimada la kulmayna ay ka wadahadleen arrimo dhowr ah oo quseeya xaaladda dalka.
Kulanka in kasta oo aan laga bixin faahfaahin dheeraad ah haddana waxa uu ku soo aadayaa xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guur ah madaxda dowladda iyo kuwa maamul gobaleedyadana ay ku madalsanyihiin shirk a furmaya Dhuusamareeb.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa magaalada Garoowe u tegay ka qeyb galka aas qaran oo loo sameeyay allaha u naxariistee ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax.
Dhinaca kalana dhammaan madaxda dowlaad gobaleedyada iyo ra’iisul Wasaaraha xukuumadda fedraalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa dib ugu laaban doona magaalada Dhuusamareeb ee shir uu uga furmayo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda iyo madaxda dowladda Soomaaliya.
Masuuliyiin ka tirsan DFS iyo Axmed Madoobe oo kulan ku yeeshay Magaalada Garoowe was last modified: July 17th, 2020 by Admin
Dhageyso:-Barnaamijka Beeraha Qeybta 10 aad
Deni oo kulamo siyaasadeed ka bilaabay Nairobi kadib heshiiskii doorashada